Git Sangit News » आफ्नो श्री’मानसङ्ग प्रेम गरेको भन्दै श्री’मतिले यु’वतीको यौ’नाङ्गमा खु’र्सानी द’लिदिइन् !
आफ्नो श्री’मानसङ्ग प्रेम गरेको भन्दै श्री’मतिले यु’वतीको यौ’नाङ्गमा खु’र्सानी द’लिदिइन् !
माघ २०, आफ्नो श्रीमानसँग प्रेम गरेको भन्दै एक महिलाले ती युवतीमको यौ’नाङ्गमा खु’र्सानी दलिदिएकी छिन । यो खबर भारतको अहमदाबादको हो । ती महिलाले आफ्ना श्रीमानसँग प्रेम गरेको भन्दै थप २ महिलाको सहयोग लिएर २२ वर्षीया युवतीको यौ’नाङ्गमा खुर्सानीको पाउडर दलेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
खबर अनुसार ती युवती उजुरी लिएर प्रहरीकहाँ पुगेको समाचार यतिबेला बाहिर आइरहेको छ । ती युवतीले आफू अहमदाबादको नारानपुरा क्षेत्रमा रहेको एउटा कपडा पसलमा काम गर्ने गरेको र गिरीश गोस्वामी नामक व्यक्तिसँग प्रेम सम्बन्ध अगाडि बढेको बताएकी छन् । ती युवती र पुरुषबीच २ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध रहेकोमा पुरुषले सम्बन्ध अन्त्य गरिदिएका थिए । युवतीले बताए अनुसार गिरीश गो’स्वामीले दुई महिना अघि उनलाई भेट्न बोलाएका थिए।
तर, यो खबर ती पुरुषकी पत्नीले समेत थाहा पाइन् । र, आफ्ना श्रीमानकी प्रेमिकामाथि रिस पोख्न साथीहरुसँग मिलेर अ’पहरण समेत गरिन् । एक सुनसान को’ठामा लगेर आफ्ना सबै लु’गा खो’लेको र यौनाङ्ग’मा खुर्सानीको पाउडर भरेको ती यु’वतीले प्रहरी स’मक्ष बताएकी छिन । अहमदाबादका प्रहरी निरीक्षक जेए राठवाका अनुसार यु’वतीको उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको छ । ती पुरुषकी श्रीमतिसहित ३ महिलालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।
प्रकाशित मिति २४ माघ २०७६, शुक्रबार ०७:१५
ओरालो लाग्यो सुनको मूल्य
भोलिदेखि नयाँ आइपिओ आउदै,
पशुपतिनाथको दर्शन गर्दै आजको राशिफल पढ्नुहोस् ।
को’रोना फैलिएपछि आजदेखि रातको समयमा क’र्फ्यु
कुलमान नभएको लक्ष्मीपूजामा लोडसेडिङ हुन्छ कि हुदैन ? यस्तो छ तयारी,
छठलगत्तै १५ दिन लकडाउन गर्न सीसीएमसीलाई सुझाव,
आजबाट यमपञ्चक सुरु, कागतिहार भने भोलि
उचाई बढाउन केके कुरामा ध्यान दिने ? मात्र यी ५ उपाय अपनाएर आफ्नो उचाई बढाउनुहोस्
बढ्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस तोलाको कति पुग्यो ?
ग्यास्टीक भयर हैरान हुनुहुन्छ, भने यी ५ मध्ये कुनै एक उपाय अपनाउनुहोस्
१६ वटा म्यानपावरले मात्रै कतारमा कामदार पठाउन पाउने ?
पैसा दोब्बर बनाउने सजिलो तरिका हेर्नुहोस, केही वर्षमै बन्न सकिन्छ करोडपति
काठमाण्डौं‌ महानगरले रोक्यो खुलामञ्चको नि:शुल्क खाना अभियान, यस्तो छ कारण ?
को’रोना संक्र’मितले अस्पतालमा भर्ना हुनुअघि नै २ लाख रुपैयाँ जम्मा नगरे उपचार नहुने,
आजदेखी यी दुइ जिल्ला पूर्ण रुपमा ब’न्द, एकचोटी अवश्य पढ्नुहोस ।
अन्तत, कक्षा १२ को परिक्षा लिने मिति तोकियो !
काठमाडौं शहरको यि ठाउमा पाईन्छ । १० लाखमा भनेजस्तै घडेरी,
भोलिबाट अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा, ब’न्द गर्ने निर्णय !
ब्रोइलर कुकुराको मा’सुको मूल्य घटेर नयाँ कीर्तिमानी कायम,
Git Sangit News
© 2018 -सर्वाधिकार सुरक्षित @ gitsangit.com